Mufananidzo unoratidza kuti kuchave nemhando nhatu dze iPhone 3 | IPhone nhau
Mufananidzo unoratidza kuti kuchave ne3 iPhone 7 mamodheru
Mwedzi mishoma yapfuura runyerekupe rwakatenderera kuti Apple yaizopa matatu ma iPhone mhando: a iPhone 7 standard, iyo iPhone 7 Plus uye iyo iPhone 7. Pro Nguva pfupi mushure mekudonha kwatanga uye chinhu chekutanga chatakaona yaive mimwe madhizaimi aiita kuti tifunge kuti iyo Pro modhi yaisazovapo, iyo yepamusoro mhando iri iyo Plus modhi, sezvairi zvave kusvika nanhasi. Nhasi, iyo French svikiro NoWhereElse akatumira mufananidzo unoratidza izvozvo pachave ne3 iPhone mamodheru, asi iyo nyowani yekuwedzera modhi ingave 4.7 inches.
Kune avo vasingazive, zvinoita sekunge zvakakosha kutaura kuti Steve Hemmerstoffer ndeye OnLeaks, imwe yeyekuvimbika mafirita aripo nhasi. Zvaanotiratidza nhasi chifananidzo, chakaburitswa paWeibo naChinese mushandi webasa, mune izvo 4 3D Kubata mapaneru kuoneka, iyo kubva kune iPhone 6s yakawedzerwa naSteve kuenzanisa uye kuratidza kuti hapana imwe yeiyo matatu 3D Kubata mapaneru nyowani ndiyo yazvino iPhone.
Pachave ne3 iPhone 7 mamodheru?
Chii chinonyanya kushamisa pamusoro peiyo yapfuura chifananidzo ndicho chakamakishwa mudenderedzwa yeyero. Kune rimwe divi, isu tine denderedzwa pane iyo 3D Kubata pani yeiyo iPhone 6s iyo inoratidza chinhu chisipo mumapanera eiyo iPhone 7. Kune rimwe divi, isu tine chinhu chitsva kuti hazvizivikanwe kuti chii, kusavapo pakati pepaneru (kana isu tichiwedzera mufananidzo, zvinoita sekunge iri mune 5.5-inch pani, yakafukidzwa nemavara). Zvine musoro, kusavapo kwechikamu ichocho pakati pepaneru kunoita kuti tizvibvunze mimwe mibvunzo, yakadai sekuti: pachave nemhando yakajairika, yakasarudzika 4.7-inch modhi uye iyo Plus modhi? Asi, kune rimwe divi, iyo pani iyo isina icho chikamu inogona kunge iri prototype, sezvakataurwa neOnLeaks.
Izvo zvinoratidzwa nedenderedzwa reorenji zvinokatyamadzawo: kana tikatora 5.5-inch pani sereferenzi (nekuti isu tinofungidzira kuti ndiyo ichave yakanyanyisa mhando) uye mune imwe Chikamu cheiyo 4.7-inch pani iyo inonyanya kufanana neiyo Plus modhi?
Mune maonero angu, uye ndinovimba handisi kukanganisa, handifunge kuti vanoburitsa modhi yakatonyanya kushoma kupfuura chiyero. Kana chero chigadzirwa chichigadzirwa, pane zvakawanda test zvikamu, Uye mamwe e3-inch 4.7D Kubata mapaneru anogona kuve chikamu cheimwe yeiyi bvunzo. Semazuva ese, isu tichabvisa kusahadzika munaGunyana. Pachave ne iPhone 7, iyo iPhone 7 Pro, uye iyo iPhone 7 Plus?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mufananidzo unoratidza kuti kuchave ne3 iPhone 7 mamodheru
iOS 10 inokutendera kuti utore kurodha pasi kubva kuApp Store neiyo 3D Kubata
iOS 10 uye nesarudzo yekuzvinyora kubva kumatsamba emazita kubva kuchisikirwo application